နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အလုပ်သမားဈေးကွက် အားကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းသည် ထိုနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါသည်. ထိုကဲ့သို့ အရေးပါသည့် ဒေတာ ၂ခုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၀၂:၃၀ MT အချိန်တွင်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ဇန်န၀ါရီလအတွင်း အလုပ်အကိုင် ပြောင်းလဲမှုဒေတာများကို သိရှိခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်. ခန့်မှန်းထားသည့်ဒေတာများကို ကျော်လွန်ကာ အားကောင်းခဲ့ပါက သြဇီဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်မည်ဖြစ်သည်.
အလုပ်လက်မဲ့ဒေတာကို ကြည့်ရာတွင် အခြားဒေတာများနှင့်မတူပေ. အကယ်၍ အမှန်တကယ်ထွက်လာတဲ့ အချက်အလက်တွေက ခန့်မှန်းထားတာထက်ပိုနည်းနေမှသာ ငွေကြေးတန်ဖိုးမြင့်တက်မည်ဖြစ်သည်. ယခင်လအတွင်း အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှုန်းထားများနှင့် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းထားများကို သိရှိနိုင်မည့်ဒေတာများဖြစ်ပါသည်.